adminBadhan Online :: Badhan Online
Madaxweyne Gaas oo Qodobo Kala Duwan ka Hadlay
Madaxweynaha Puntland CabdiweliMaxmed Cali Gaas ayaa waraysi gaar ah siiyey idaacadda VOA wuxuuna kaga hadlay qodobo kala duwan oo ay ka mid tahay Wareejinta Dekedda Boosaaso, Guryo la sheegay in xukuumaddu duminaysay oo ka agdhowaa dekedda, Lacagaha la daabaco, Xiisadda Galmudug iyo weliba Shirka Kismaayo ka dhacaya.
Weriyaha VOA Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa Madaxweynaha ku waraysatay Boosaaso.
Halkan ka DHEGAYSO
This entry was posted in Wararka Maanta on October 2, 2017 by admin.
Nin dameer xun iibsaday, marbuu dib u xaraashaaye” – Cabdi Gahayr
“Nin dameer xun iibsaday, marbuu dib u xaraashaaye.” Tuducaa gabaygan Abwaan Cabdi Gahayr waxay si fiican uga muuqataa Dimuqraadiyadda. Sheekadu waa dameerkaa haddii uu kugu xummaado aad dib isaga iibin karayso iyo xoriyadda uu qofku u leeyahay aayo-ka-tashigiisa.
Haddaba, Dimuqraadiyaddu waxay ku fiican tahay, madaxda dadku ay doorteen haddii ay ku xummaadaan, si dhib yar ayaa loogaga soo ceshan kara xilka, iyada oo aan qori loo qaadan ama lagu baacsan sidii Qadaafi ama Siyaad Barre.
Baarlamaanka Puntland waa Meesha sartu ka Qudhuntay waxba yaan Madaxweynaha la Eedayn Hashiiska Muranka Badan dhaliyay,& Lacagta Faalisada ah ee Bosaaso lagu daabacay Waxa waajib- Dastuuri ahi ka saaran-yahay Baarlamaanka iyo inay Shacabka Qanciyaan…..
Dad badan baan arkay oo Dhaliisha Madaxweynaha & Golihiisa Wasiirada 66-Mudane ee Aan hada ka hor u bixayay Maxaabiis Siyaasadeed iyagaa Masuul ka ah Hagida Waajibaadka Dastuuriga ah ee u dhaarteen.
Puntland Gu”Maahee Garaad uma kordhin,Galmudugtaa Xaafada Gaalkacayo calanka-ka taagatay,Maxaan dhaanaa maanta hadii Aan lagu dhaqmayn Axdi Qarameedkii Bulsho dhigatey.
Dad ku dhintay dibadbaxyada Cameroon
mmada ammaanka ee dalka Cameroon ayaa lagu soo warramayaa inay toogasho ku dileen ilaa iyo todoba qof inta ay socdeen dibadbaxyo ay wadeen dad u ololeeya xuquuqda aadanaha oo ku baaqayay in xorriyad ay helaan gobollada Afka Ingiriisiga looga hadlo ee dalkaasi.
Dibadbaxyada ayaa ka dhacay dhowr magaalo oo gobolkaasi ku yaal, kuwaas oo lagu xusayay sanadguurada markii lagu daray gobolka looga hadlo Afka Ingiriisiga ee Cameroon.
Maayirka magaalada Kumbo ayaa BBC-da u sheegay in todoba qof lagu dilay magaaladiisa, dadkaas oo shan ka mid ah ay ahaayeen maxaabiis la toogtay kaddib markii dibadbaxayaasha ay dab qabadsiiyeen xabsigii ay ku jireen.
Dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha ayaa ku baaqay in la sii daayo maxaabiista laga soo qabqabtay dibadbaxyadii xiriirka ahaa ee dalkaasi ka dhacay sanadkii la soo dhaafay.
Maayirka ayaa sheegay in dibadbaxayaasha ay goobaha muhiimka ah ee magaalada Kumbo oo uu ka mid yahay qasriga boqortooyada ay ku hor lulayeen calanka ay isticmaalaan kooxaha u dhaqdhaqaaqa u gooni u goosadka.
Dibadbaxyo kale ayaa waxa ay iyana ka dhaceen qeyba kale oo ka mid ah gobollada looga hadlo Afka Ingiriisiga ee dalka Cameroon.
Wax u muuqday dhaqdhaqaaq lagu dalbanayo xuquuq wanaagsan ayaa isubadalay in si cad ay dadku u dalbadaan madaxbannaani, arrintaas oo dowladda Cameroon aanay aqbali doonin.
This entry was posted in Wararka Maanta on October 1, 2017 by admin.
Badhan oo taageertay SSB (Sawiro)
Badhanonline.com Magaalada Badhan ee G.Sanaag waxa lagu qabtay shir balaadhan oo lagu taageeray Ururka Xoraynta & Midnimada Maakhir ee SSB Shirkaasi waxa uu Daba socdaa Shirarkii Bosaaso, Iyo Woqooyiga America lagu qabtay dhawaan.
Allsanaag ayaa Baahiyay Muuqaal Sawiro Riix Halkan
Trump oo shaaciyay qorshahiisa canshuur dhimista
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaaciyay qorshaha waxa uu ku tilmaamay canshuur dhimistii ugu ballaarnayd taariikhda dalka Mareykanka.
Trump oo ka hadlayay gobolka Indiana ayaa waxa uu sheegay in uu doonayo in uu fududeeyo hannaanka canshuuraha si shaqooyin iyo maal badan looga helo gudaha Mareykanka.
Waxa uu sheegay in dadka dabaqadda dhexe iyo kuwa shaqaalaha ahi ay ka faa’iideysan doonaan qorshahani balse aysan ku jirin kuwa dakhliga badan uu soo galo.
Sidoo kale Trump waxa uu sheegay in canshuur dhimis loo sameyn doono ganacsatada.
Madaxweyne Trump waxa uu intaasi ku daray in mar dambe aysan jiri doonin canshuurta laga qaado hantida uu dhaxal ahaan qofka u helo iyo siyaabo kale oo canshuurta dadka looga qaadi jiray.
Trump ayaa xilligii uu ku jiray ololaha doorashada ayaa waxyaabihii uu ballan qaaday waxaa ka mid ahaa in uu isbadal weyn ku sameeyo qaabka canshuuraha dalka.
Taageerayaashiisa ayaa sheegaya in isbadalkaasi uu xoojin doono koboca dhaqaalaha Mareykanka balse dadka dhaliila siyaasadda Trump ayaa waxay ku doodayaan in arrintan ay horseedi doonto in uu yaraado kharashaadkii ay dowladda ku shaqeyn jirtay.
This entry was posted in Wararka Maanta on September 28, 2017 by admin.
Puntland:- Madaxweynaha oo Bosaaso kula-kulmay Odayaasha G.Sanaag & Bari (Sawiro)
Badhanonline.com Madaxweynaha Dawladda Puntland Xaaji Cabdiweli gaas ayaa Boosaaso kula kulmay ururka Sanaag, Sool iyo BarI oo loo asaasay sidii Buuraha Calmadow looga saari lahaa Dadqalatooyinka xooga ku jooga oo maalin walba dhiiga ku daadinaya
Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta 27 September 2017 magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland kulan kula yeeshay Ururka SAanaag, Sool iyo Bari
Kulanka ayaa waxaa Madaxweynaha ku wehelinaayey guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland Mudane. Axmed Cali Xaashi, masuuliyiin ka tirsan goleyaasha dawladda Puntland, taliyaha ciidamada qalabka sida Sareeyo Guud. Saciid Maxamed Xirsi, saraakiisha ciidamada gobolada Sanaag iyo Hayland iyo saraakiil ka tirsan Madaxtooyada dawladda Puntland.
kulanka oo ahaa mid looga hadlayey xaalada guud ee amniga gobolada sanaag iyo Hayland ayaa waxaa sigaara diirada loogu saaray cidhib tirka kooxaha Al-shabaab ee ku dhuumaalaysanaya buuralayda Calmadaw, kooxahaas oo ay lagama maarmaan tahay in laga yeesho hadaf midaysan.
Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ugu horayn kulanka furay ayaa si qoto dheer uga hadlay muhiimadda ay leedahay in meel looga soo wada jeesto hadaf midaysana laga yeesho cadawga ummadda Soomaaliyeed ee Al-shabaab, kuwaas oo ku dhuumaalaysta buuralayda Calmadaw, islamar’ahaantaana sheegay in dawladdu diyaar u tahay qorshe kasta oo lagaga gungaadhayo soo afjaridda kooxaha Al-shabaab ee lidka ku ah jiritaanka, horumarka, iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale xaqiijiyey in shacabka Puntland looga baahan yahay isku duubni iyo inay ka midaysnaadan wax kasta oo lasoo dersa, si loo soo gebagebeeyo firxadka yar ee ku sugan buuralayda Calmadow ee ka tirsan kooxaha Al-shabaab.
Guddoomiayaha golaha wakiilada dawladda Puntland Mudane Axmed Cali Xaashi ayaa dhankiisa sheegay in dawladda Puntland iyo shacabkeedu ku caana maaleen iskaashi, is garabsi, cudud midaysan, hadaf midaysan iyo isku tashi, sidaasi darteedna ay muhiim tahay in meel looga soo wada jeesto cadawga tirada yar ee tamarta yar ee kooxaha Al-shabaab loona baahan yahay in si adag loo cidhib tiro.
Dhinaca kale Nabadoonada iyo Waxgaradka Gobolada Sanaag iyo Hayland ayaa balanqaaday inay diyaar u yihiin kana midaysan yihiin wax kasta oo dhankooda looga baahdo, isla markaana waxa ay xukuumadda dawladda Puntland uga mahad celiyeen mashaariicaha horumarineed ee ka socda gobolada Sanaag iyo Hayland, gaar ahaan wadda Ceel-daahir – Ceerigaabo oo dhismeheedu meel wanaagsan marayo.
Ugu Danbayn, Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ugu baaqay shacabka reer Puntland meel kastay joogaan inay ka qayb qaataaan halganka lagula jiro cidhibtirka kooxaha al-shabaab iyo sugidda xasiloonidooda iyo amaanka guud ee Puntland, isla markaana waxa uu Madaxweynuhu ku booriyey shacabka inay la shaqeeyaan ciidamada amaanka.
Gudoomiyaha SSB oo Kulan Wareed ku qabtey Columbus (DHEGAYSO)
Badhanonline.com- Gudoomiyaha Ururka SSB Maxamed Ismaaciil Jaamac Qaarey ayaa Warbaahinta kula hadlay Maagaalada Columbus waxana uu Faah Faahiyay Dhismaha Madasha SSB & Ujeedka loo aas-aasay.
Gudoomiyaha ayaa xusay in Muhiimada Ururkaasi ay tahay sidii loo xoran lahaa Dhulka Maakhir,.
Halkan RIIX si aad u DEHAGayso
Khilaafka Galmudug oo Saameeyay Golaha Wasiirada Dowlada Dhexe
Qalalaasaha siyaasadeed ee ka taagan maamulka Galmudug ayaa sababay in qoraalo is khilaafsan ay ka soo baxaan Xukuumadda Federaalka ah, kuwaas oo qaarna lagu taageerayo go’aankii qaar kamid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Galmudug, halka kan kale lagu beeninaayo qoraalkaas jiritaankiisa
Kadib markii Taaladadii shalay qaar kamid ah Xildhibaanada Galmudug ay sheegeen in ay xilkii ka qaadeen Madaxweyne Xaaf ayaa waxaa Dowladda federaalka ka soo baxay qoraal lagu taageerayo go’aankaas.
Qoraalka taageerada ayaa ka soo baxay Wasaaradda Warfaafinta, waxaana loo dhigey in ay ka soo baxdey Wasaaradda Arrimaha Gudaha, qoraalkaas ayaa soo marey wadddo sax ah ama halkii Wasaaradda Warfaafintu kala xiriiri jirtey warbaahinta kale, taas oo caddeyneysa in qoraalka aan laga soo dirin waddo khaldan.
Wasaaradda Arimaha Gudaha iyo Federaalka oo shaqadeedu tahay in ay gasho arrimaha ka taagan Galmudug ayaa soo saartey qoraal rasmi ah oo uu ku saxiixan yahay Wasiirka Arimaha Gudaha iyo Federaalka Cabdi Faarax Siciid, waxaana qoraalku waxba kama jiraan ku tilmaamey kii ka soo baxay Wasaaradda Warfaafinta ee u hadashey isla wasaaradiisa isaga oo aan waxba ka ogeyn, qoraalka ka soo baxay Wasiirka Arrimaha Gudaha ayaa ah mid xaaladda lagu dejinaayo, waxaana uu yahay mid lagu taageerayo Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf, laguna dalbanayo in xaaladda la dejiyo.
Dowladda Federaalku waxay waxba kama jiraan ku tilmaantey go’aankii aan dastuurka waafaqsaneyn ee Xildhibaaano tiro yar gudaha magaalada Cadaaado ku gaareen.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Cabdi Faarax
Haddaba maxay tahay sababta Wasaaradda Warfaafintu ay ugu hadashey Wasaarad kale iyada oo aan soo xiganeyn?. Qoraalka ka soo baxay Wasaaradda Warfaafintu miyaanu keeney jaahwareer oo uu sii murgineyn xaaladda cakiran ee ka taagan Galmudug iyada oo qoraalku yahay been abuur sida lagu sheegay warka ka soo baxay Wasiirka Arrimaha Gudaha.
Qoraalka ka soo baxay Warfaafinta waxaa lagu daabacay barta Twitter-ka ee Warsaadda, kan facebook iyo weliba wakaaladda wararka ee SONNA. Warar aan la xaqiijin oo laga soo xiganayo Wasaaradda Warfaafinta ayaa sheegaya in qoraalka uu gaarsiiyey Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Arrimaha Gudaha Cabdullaahi Faarax Wehliye, haddii ay taasi run tahay qoraalkan waa mid Dowladda gelin kara Jaahwareer, waxaana khasab ah in qof shaqadiisa ku waayo, marka la tixraaco sida Dowalddu u baahisey dhacdadii Bariire iyo go’amaadii Raysalwasaaruhu ka qaatey hagaajinta wararka ka baxaya Dowladda.
Hoos ka kahrti labada qoraal ee iska soo horjeeda.
This entry was posted in Wararka Maanta on September 27, 2017 by admin.
Xamar oo laga teegaray SSB (Warbixin)
Siyaasiyiinta Gobolada Hayland, Sanaag, Sool & Gobolka Bari ayaa taageeray shaqada Ururka SSB ee ay Gudaha & dibada ka hayaan Khadka telefoonka waxana nagula soo xidhiidhay Xildhibaano dowlada Faderaalka ka tirsan oo ay ka mid yihiin Siciid Daahir Bootaan & Sahra Qoosrheel & Siciido Xasan dhamaantood waxay sheegeen inay Garab taaganyihiin Shaqada Ururkaasi.
Waa Markii ugu horasay oo Urur noocaan ah oo Siyaasada & Horumarka deegaanadaasi u taagan looga dhawaaqo Goboladaasi
Waraysi Naga Filo dhawaan Radio Badhan
Xaaf oo beeniyay in baarlamaanka Galmudug uu xilka ka qaaday
Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf ayaa beeniyay in baarlamaanka dowlad goboleedkaasi uu xilka ka qaaday.
Xaaf ayaa sheegay in dastuuriyan aysan hadda xildhibaanadu isaga xilka qaadi karin, maadaaama sida uu sheegay uu xilka hayo afar bilood oo kaliya, dastuurkuna uu qabo ilaa lix bilood ka hor in aan xil ka qaadis lagu sameyn karin.
Hadalkiisa ayaa yimid kaddib markii qaar ka mid ah xildhibaanada Galmudug ay shegeen in ay xilka ka qaadeen madaxweynaha oo ay ku eedeeyeen inuu hor istaagay hawlihii baarlamaanka.
Madaxweyne Xaaf oo qadka taleefoonka ugu warramay weriyaha BBC-da Xasan Cali Geele ayaa ugu horreyn ka hadlaya sida uu u arko hadalka ka soo yeeray baarlamaanka Galmudug ee ah in ay isaga xilkii ka qaadeen.
© 2017 Badhan Online - All rights reserved.
Designed by Madiina ICT.